Alaabta gadhka: wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku daryeesho timaha wajiga | Ragga Stylish
Waxyaabaha gadhka waa wajiga ugu dambeeya ee timaha wajiga. Marka hore waxay timaaddaa xulashada qaabka ugu habboon ee qaabka wajiga iyo dayactirka.
Laakiin noqoshada dambe micnaheedu maahan inay iyagu muhiimad yar yihiin. Dhab ahaan, daryeelka timaha wajiga waa lagama maarmaan si loo helo nooca ugu fiican ee suurto garkaaga.
1 Shaambo garka
2 Qalabka gadhka
3 Saliida gadhka
4 Beerta gadhka
5 Shanlay gadhka
6 Xilliga dambe
7 Maqas gar iyo shaarib
Sida timaha oo kale, garka ayaa wasakhda urursada. Marka, si aad ugu haysato xaalad wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u maydho. Biyaha diirran kuma filna inay ku soo celiyaan timaha xaaladdooda dabiiciga ah, halka qaar ka mid ah shaambooyada caadiga ah waxay noqon karaan kuwo waxtar leh, laakiin aan waxtar u lahayn sida mid gaar ah oo loogu talagalay gadhka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo tixgeliyaa inay yeelan karaan waxyeellooyin qaarkood, sida cuncun.
Tixgeli oo ay ku jiraan a shaambo gadhka nadaafaddaada caadiga ah. Codso adigoo raacaya isla talaabooyinka marka aad maydho madaxaaga. Xoogaa saar gacmahaaga oo si fiican ugu masax dusha guud ee gadhka. Hubso inay waliba dhex gasho maqaarka hoostiisa. U daa dhowr daqiiqo oo biyo raaci biyo fara badan.
Kiis la mid ah shaambada. Marka ay timaado hagaajinta garkaaga, waxaa wanaagsan in la helo conditioner-ka kaliya gadhka. Shaqadeedu waa inay ka tagto gadhka muuqaal fiican (kororka dhalaalka waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn) oo diyaar u ah qaab jiido la'aan. Sida loo isticmaalo waa sida soo socota: marka hore isticmaal shaambo garka. Biyo raaci ka dib, waxaa la joogaa waqtigii qaboojiyaha. Codso, daa daqiiqado kadibna mar kale biyo raaci.
Waad iibsan kartaa shaambo iyo qaboojiyaha si gooni ah ama u tag a 2-1-XNUMX shaambo garka iyo qaboojiyaha sida kan ay soo bandhigtay sumadda Bulldog.
Marka laga hadlayo alaabada gadhka, waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan. Codso saliida gadhka waxay waxtar u leedahay garka iyo maqaarka labadaba. Ka sokow ka hortagga timaha inay noqdaan kuwo qallalan oo jajaban (xaalad ku dhacda gaar ahaan gadhka cirro leh), oo ay ku jiraan saliidda gadhka ee nadaafaddaada caadiga ah ayaa sidoo kale kaa caawin maqaarka hoostiisa ku hay biyo oo tirtir cuncunka dhibta leh.
Qoyaanka maqaarku aad ayuu muhiim u yahay marka aad gadhka xiraneyso. Taasina waa timaha wajiga inay waxyeeleeyaan qoyaanka dusha sare ee maqaarka, taas oo uga tagi karta qalalan, cidhiidhi ah iyo, xaaladaha qaarkood, jilicsan (sida cowska madaxa laakiin gadhka). Nasiib wanaagse, saliidaha gadhka ayaa ka caawiya in waxaas oo dhan la xakameeyo. Maxaa intaa ka badan, waa inaan ku darnaa dhalaalka iyo urka wanaagsan ee ay bixinayaan.
Markaad codsaneyso sheygan, waxaad si fudud ugu duugi kartaa calaacalahaaga iyo farahaaga ama waxaad isticmaali kartaa shanlo gadhka ah si aad u qaybiso. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo inuu maqaarka garka hoostiisa si sax ah u dhex galayo, iyo sidoo kale inuu xiriir wanaagsan la sameeyo timaha oo dhan, waana wax shanladu caawin karto.
Si aad wax badan uga hesho saliida gadhkaaga, tixgeli inaad isticmaasho isla markaaba ka dib qubayska. Sababta ayaa ah tan waxay haysaa qayb ka mid ah qoyaanka dheeriga ah ee biyuhu soo saaraan.
Ujeedada gadhka xiiran ficil ahaan waxay lamid tahay tan saliidaha. Waxay u adeegtaa inay ku hayso timaha wajiga iyo maqaarka hoosta nafaqada, iyo sidoo kale inay ku darsato dhalaal iyo caraf gadhka. Si kastaba ha noqotee, adigoo culus, gacan ka geysashada qaabeynta iyo hagaajinta gadhka si ka fiican.
Waad ku mahadsantahay wax soo saarkeeda iyo subagyadeeda, sheygan waa fikrad aad u wanaagsan qaabeynta garka dhexdhexaad iyo dhaadheer. Si kastaba ha noqotee, dhammaan ragga garka leh guud ahaan way ka faa'iideysan karaan iyaga sifooyin si loo xakameeyo oo loo simo qufulka aan xakamaynta lahayn ee gadhka iyo shaarubaha labadaba.
Shanlooyinka gadhka ayaa si aad u wanaagsan u shaqeeya markay tahay maareeyaan gadhka u janjeera mowjadaha iyo qallalka. In kasta oo aadan u baahnayn inaad yeelato gadh madax adag si aad u adeegsato qalabkan. Sida badeecadaha kale, dhammaan ragga gadhka leh guud ahaan wax badan ayey ka faa'iideysan karaan burushka joogtada ah.
El Wax alaab ah lama helin. fure u ah qaabeynta garka dhexdhexaadka ah iyo dheer iyo sidoo kale jarista timaha iyo gacan ka geysashada faafinta alaabada nafaqada leh sida saliidaha iyo baalasyada.
Doorka dabada ka dambeysaa waa xir daloolada kana ilaaliya casaanka iyo infekshinka meelahaas ay mandiilku ama mashiinka korontada ku cadaadiya maqaarka.
Waa fikrad fiican in la yeesho a sharafta ka dib xaga nadaafada haddii aad xiiran tahay ama gadh leedahay oo aad si joogto ah u goyso. Markii la adeegsado waxay soo saartaa dareemo yar oo xiiq ah. Haddii aysan isla markiiba tagin, waxaad u baahan kartaa inaad beddesho dushaada dambe.
Maqas gar iyo shaarib
Badeecooyinka gadhka badankood waxay u baahan yihiin in xilliyo la cusbooneysiiyo, halka kuwa kalena cimrigooda oo dhan socon karaan. Ku garka birta ah iyo maqaska maqaska waxay kaa caawin doonaan inaad sawirato khadadka la rabo, inaad dayactirto iskuna ekaato timaha aan sharci darrada ahayn. U adeegso iyaga oo gacan ka helaya shanlada gadhka markasta oo aad u aragto inay lagama maarmaan tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Waxyaabaha gadhka